Paris Saint-Germain oo dalab waali ah ku raadineysa Toni Kroos – Gool FM
(PSG) 19 Maarso 2018. Kadib markii ay isaga hareen tartanka Champions League, waaxda isboortiga ee kooxda Paris Saint-Germain ayaa waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan sida ay ku xoojin lahaayeen xarumaha kala duwan ee kooxda kahor xili ciyaareedka soo socda.
Iyadoo lagu sii dhowaanayo in Adrien Rabiot uu ka dhaqaaqo safka PSG isbuucyada soo socda, sababa la xiriira in uu soo idlaanayo heshiiska uu ku joogo garoonka Parc des Princes ayaa hadana waxaa soo baxaya warar ku aadan in kooxda reer France ay dooneyso magaca ciyaaryahan cusub si ay kaga dhigato badalkiisa.
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa cadeesay sida weyn ay u xiiseeneyso saxiixa khadka dhexe Real Madrid ee Toni Kroos, kaasoo haatan ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan uu heysto macalinka reer France ee Zinedine Zidane.
Paris Saint-Germain ayaa diyaar la ah inay 80 milyan oo euros ku qarash gareyso sida ay ku heli lahayd adeega xidiga khadka dhexe ee reer Germany, iyadoo diyaar la ah in xitaa mushaarkiisa ay sare u qaado 50%,si uu u ogolaado imaatinka garoonka Parc des Princes.
Yeelkadeeda, kadib soo laabashada Zidane ee kooxda Real Madrid ayaa la micno ah in dhameystirka heshiiskan uusan aheyn mid sahlan, maadaama go’aanka kaga aadan macalinka reer France ee ciyaaryahankan ay tahay wax iska cad, sababtoo ah wuxuu u arkaa in Toni Kroos uu si weyn muhiim ugu yahay mashruuciisa xili ciyaareedka soo socda.